6-da tartan ee fardaha aduunka ugu caansan | Fardaha Noti
Tartanka fardaha adduunka ugu caansan
Monica Sanchez | | Tartanka fardaha
Ma ka mid tahay kuwa ku raaxeysta daawashada faraska orodka? Markaa waxaad u badan tahay inaad ka mid tahay kuwa riyooda, oo ku raaxeysanaya sida cunug yar oo nacnac wata, daawanaya tartanka sinnaanta. Waana taas, isku xidhka ka dhexeeya xayawaanka iyo kan fuushan, xawaaraha ay ku gaadhayaan… waa wax kaa dhigaya inaad aad u wanaagsan tahay.
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad ogaato waa kuwee tartamada faras ee adduunka, Maqaalkan waxaan uga hadlayaa kuwa aan seegi karin duruuf kastoo jirta.
1 Goormay bilaabeen inay jiraan?
2 Maxay yihiin kuwa ugu muhiimsan?
2.2 Prix ​​de L'Arc de Triomphe
2.3 Koobka Noolaha Koobka
2.4 Koobkii Japan
Goormay bilaabeen inay jiraan?
Tartanka fardaha, sidaan ognahay maanta, waxay bilaabeen inay noqdaan goob dadweyne oo laga daawado Giriiggii Hore, 2000 sano kahor. Danta ay abuureen awgood, waxay markiiba ka mid noqdeen Ciyaaraha Olombikada. Wixii intaa ka dambeeyay, waxay ahayd markii ay xayawaankani bilaabeen inay soo jiitaan dad badan oo doonayay inay u yeeshaan xayawaan tartan ah, ama wehel u ah ... ama labadaba.
Maxay yihiin kuwa ugu muhiimsan?
Waa tartanka fardaha heer sare. Waxaa lagu qabtaa sanad kasta Sabtida ugu horeysa bisha May, Churchill Downs, Louisville, Kentucky. Daabacaaddii ugu horreysay waxay ahayd 1875. Ilaa maantadan la joogo, waxay hoggaamisaa Triple Crown ee tartanka waddo-dhexaadka ah ee Mareykanka.
Xayawaanku waxay ordaan 1,25 mayl (2,01km), kii guuleystana wuxuu qaataa 2 milyan oo doolar, oo ah lacag aan laga fiirsan karin, dabcan.
Waa dhacdada tartanka ugu muhiimsan Yurub. Lagu qabtay Axadii koowaad ee Oktoobar tartanka Longchamp ee magaalada Paris, France. Daabacaaddii ugu horreysay waxay ahayd 1920-kii, waxaana tartamaya fardo laga bilaabo saddex jir iyo wixii ka sarreeya.
Xayawaanku waxay ordaan 1,5 mayl (2,41km), qofka guuleystana wuxuu helaa 5,5 milyan oo doolar, lacagtaas oo hal mar ahayd 2 milyan. Thanks to Qatar Racing iyo Equestrian Club oo la wareegaya kafaalaqaadkooda tiradaas waa la kordhin karaa.
Koobka Noolaha Koobka
In kasta oo la qabtay tan iyo 1984, waa tan ugu taajirsan Maraykanka. Waxaa la qabtay dhammaadkii Oktoobar ama horraantii Nofeembar, sanad walba orad orod ka duwan.
Xayawaanku waxay ordaan 1,25 mayl (2,01km), kii guuleystana wuxuu qaataa $ 5 milyan.
Waa tartanka ugu muhiimsan ee faraska Japan. Lagu qabtay usbuucii ugu dambeeyay ee Noofambar tartanka Fuchu (Tokyo) ilaa 1981.
Xayawaanku waxay safraan 1,49 mayl (2,39km), qofka guuleystana wuxuu helaa qiyaastii $ 4,6 milyan.
Waxaa sidoo kale loo arkaa mid ka mid ah tartamada ugu muhiimsan ee faraska. Waxaa lagu xusaa on dhammaadka usbuuca koowaad ee bisha Juun sanad walba oo ku yaal Epsom Downs, Surrey, England, laga bilaabo 1779. Wuxuu qayb ka yahay Ingiriis Triple Crown, oo ay weheliyaan 2000 Guineas Stakes iyo St Leger Stakes.
Xayawaanku waxay safraan 1,50 mayl (2,41km).
Waa tartanka ugu muhiimsan Spain. Waa la xusaa Axaddii ugu horreysay ee Luulyo ee Hipódromo de la Zarzuela, Madrid, tan iyo 1919. Fardo iyo maareyaal seddex sano ama ka badan kaqeyb qaadan kara.
Xayawaanku waxay safraan 1,55 mayl (2,5km).
Haddii aad fursad u hesho inaad mid aado, xaqiiqdii waxaad heli doontaa waqti fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Anshaxa » Tartanka fardaha » Tartanka fardaha adduunka ugu caansan
Faraska Fardo ee Spain
Sida loo doorto koore